Donald J Trump oo xubnaha xukuumadiisa cusub kusoo daray niman cunsuryiin ah oo laga qeyliyay – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Donald J Trump oo xubnaha xukuumadiisa cusub kusoo daray niman cunsuryiin ah oo laga qeyliyay
Madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald J Trump ayaa maalintii jimcaha ahayd soo magacaabay xubnaha xukuumadiisa ka mid noqon doono, waxaana xubnahaasi ka mid ah rag la sheegay inay yihiin dad cunsuriin ah oo xilal kala duwan kasoo qabtay dalkaas.
Donald J Trump ayaa la sheegayaa inuu xeer ilaaliyaha guud ee Mareykanka u xushay Senator-ka laga soo doortay gobalka Alabama Senator Jeff Sessions, kaas oo hore marar badan lagu eedeeyay falal cunsurinimo oo ka dhan ah dadka Madowga Mareykanka ah.
Sidoo kale, Donald Trump ayaa la taliyihiisa dhinaca amniga u xushay Jeneraalka shaqada ka fadhiistay ee lagu magacaabo Michael Flynn, kaas oo isna kamid ahaa raggii sida weyn u taageeray xiligii uu ololaha doorashada ku jiray.
Michael Flynn ayaa ah shaqi lagu yaqaan naceybka uu u qabo dadka muslimiinta ah, waxaana la filayaa inuu saameyn aad u weyn ku yeesho qaabka xukuumada cusub ee Mareykanka ula macaamili doonto dadka muslimiinta ah ee ku nool dalkaas.
Dhinaca kale, warar soo baxaya ayaa sheegaya in xukuumada cusub ee Donald Trump ay soo wadaan qorshe cusub oo la doonayo in lagu diiwaan-geliyo dadka muslimiinta ah ee ka dhoofaya dalkaasi Mareykanka.
Donald J Trump ayaa ugu dambeyn xilka agaasimaha hay’adda sirdoonka ee CIA-da u magacaabay xildhibaan ka tirsan Aqalka Kongareeska oo lagu magacaabo Mike Pompeo.
Mike Pompeo ayaa la sheegayaa inuu horey uga soo mid ahaan jiray guddiga baarlamaanka Mareykanka u qaabilsan arrimaha sirdoonka, waxaana durbadiiba walaac aad u xoogan arrintaan ka muujiyay dadweyne aad u badan oo ku nool dalkaas.